घरघरै पुगेर उपचार
२o७५ माघ ६ आइतबार / Sunday, January 20, 2019
२o७५ भदौ ४ सोमबार
रत्ननगर। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नं ५ झुवानीकी ९२ वर्षीया खड्गकुमारी ढुंगाना यतिखेर दङ्ग हुनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले आज घरमै उपचार दिन आएपछि उहाँ खुशी हुनुभएको हो । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहको चुनावका बेला वृद्धवृद्धालाई सहयोग गर्लान् र देशलाई सम्हालान् भन्ठानेर उहाँले सकिनसकी गएर भोट हाल्नुभएकै हो । भोट हालेर फर्कने बित्तिकै उहाँलाई उच्च रक्तचापले ढाल्यो । निको बनाउन अस्पताल राखिए तर, व्यथा झन् बल्झियो ।
“लौ अब बाँचिंदैन झै लाग्या’थ्यो, अस्पतालले पनि अब सकिन्न, घरै लैजानू भनेर पठाए,” बुहारी भवानीले घटना सम्झँदै भन्नुभयो, “घरमै राखेर औषधिमुलो ग¥यौं । अहिले शरीर फि¥यो ।” खड्गकुमारीले अर्को जुनी पाएकामा खुशी भएको ढुंगानाको परिवार आज अकस्मात् घरमै सरकार ९स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि० आइपुग्दा रोमाञ्चित नै भए । औषधिसहितको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोली उहाँको घर पुगेको थियो ।
“पोहर भोट हालेको हो, आज घरमै सांसद–मेयर आए, घरमै आएर सोधखोज गर्ला भन्ने त सुइँको थिएन,” वृद्धा खड्गकुमारीले दङ्ग पर्दै भन्नुभयो । भोट हालेकाले जितेको अनुभव समेत उहाँले सुनाउनुभयो । आफ्नै स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आएको देखेर उहाँ गद्गद् हुनुभयो ।
“तपाईंहरु आउनुभयो, गजब भो बाबु, अब ओल्लार–पल्लार हिंड्न पाए हुन्थ्यो,” प्रदेश नं ३ की सांसद कञ्चन खनाल, रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वन, उपप्रमुख विमला दवाडीसामु आशावादी देखिनुभएकी खड्गकुमारीले भन्नुभयो ।
उहाँ यसो भनिरहँदा वडाध्यक्ष कृष्ण महतो उपचारको बन्दोबस्तमा हुनुहुन्थ्यो भने रत्ननगरका स्वास्थ्य सहायक शिवप्रसाद पौडेल र प्रयोगशाला सहायक सरोज देवकोटा चिनी र रक्तचाप जाँच्दै हुनुहुन्थ्यो ।
अहिले खड्गकुमारीका खुट्टा लुला भएका छन् । हिँड्डुल गर्न गा¥हो हुन्छ । रक्तचापको औषधि नियमित खानुहुन्छ । ह्वीलचियरको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ उहाँ । यताउता जाँदा परिवारले समाइदिनुपर्छ । उहाँलाई अस्पताल लान र लैजान बडो समस्या हुन्छ । अशक्त वृद्धवृद्धाले यसरी घरघरै उपचार पाउने हो भने सामान्य जनता धेरै खुशी हुनेछन् । यस्तो उदाहरणीय प्रयाश रत्ननगर नगरपालिकाले शुरु गरेको छ ।
रत्ननगर ५ झुवानीकै छिमेकी ९१ वर्षीय टंककुमारी रिजाल पनि बिरामी हुनुहुन्छ । चाउरिएका गाला उज्यालो पार्न उहाँलाई सकस हुन्छ । लठ्ठीको सहाराले हिँड्डुल गर्नुहुन्छ । “के हुन्छ आमा रु” स्वास्थ्यकर्मी शिवप्रसाद पौडेलले सोध्नुभयो । “पेट, छाती यसै भतभत हुन्छ,” साउतीको स्वरमा उहाँले जवाफ दिनुभयो ।
नापजाँच गर्दा उहाँमा रक्तचाप र चिनीको मात्रा सामान्य देखियो । उहाँलाई पनि नियमित रक्तचापकै औषधि खुवाउने गरिएको बुहारी नीलकुमारी रिजाल बताउनुहुन्छ । बिरामीले थला परेकाले उहाँलाई बच्चालाई खुवाउने जस्तो लिटो बनाएर, अनि भात तरकारी मिची नरम पारेर खुवाउने गरिएको छ ।
सन्तानब्बे वर्षका वृद्ध विष्णुप्रसाद रिजाल अझै ठमठम्ती हिँड्नुहुन्छ । “बेलाबेलामा रिंगटा लाग्ने भाउन्न हुने हुन्छ, दिसापिसाब सबै राम्रो छ, त्यही पनि पिसाब चाहीँ पोल्छ,” रिजालले स्थास्थ्यकर्मीसामु आफ्नो समस्या बताइदिनुभयो ।
यसरी गाउँमै जनप्रतिनिधि आउँदा उहाँपनि दङ्ग पर्नुभयो । “खासा लाग्यो, यसरी सेव ागर्न आएपछि धेरै आशा भरोसा हुन्छ,” रिजालले आफ्नो संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भन्नुभयो । कतिपय वृद्धवृद्धा जनप्रतिनिधिहरु एक्कासी घर आएको देखेर नै दंग परे । कतिपय भने जाँच गर्न आउने थाहा पाएपछि नजीकैको झुवानी विद्यालयमा जम्मा भएका थिए ।
“अलिकति सुगर छ भन्या छ, घर खोज्दै खोज्दै आउँछन् रे,” स्वास्थ्य परीक्षणपछि घर जाँदै गर्दा ८० वर्षकी गंगादेवी लम्सालले भन्नुभयो ।
उहाँहरु प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले अहिले ८० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धालाई घरघरै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको छ । घरधुरी सर्वेक्षणमा रत्ननगरमा एकहजार ५० जना ८० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धा छन् । उनीहरु हरेकलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने नगरप्रमुख नारायण वनले बताउनुभयो ।
“प्रारम्भिक सेवा घरमै हुन्छ, जटिल भए एम्बुलेन्समार्फत विशेषज्ञ चिकित्सककहाँ पु¥याउँछौं,” वनले भन्नुभयो, “यो अभियान अब दैनिक चल्छ ।” नगरपालिका विस्तारै समृद्ध हुँदै गएपछि भने उमेर हद घटाएर ७० वर्षमाथिकालाई पनि सेवा पु¥याउने सोच रत्ननगर नगरपालिकाले बनाएको छ ।
अहिले पनि कतिपय परिवारमा आफ्ना बुबाआमालाई वृद्धाश्रम लगेर छाड्ने चलन छ । कतिपयले हेलाँ गरेर घरमै राखेका छन् । यसरी जनप्रतिनिधिहरु घरघरै आएर सेवा दिनु अन्य स्थानीय तहका लागि समेत नमूमा हुने निर्विवाद छ । नेपाल सरकारको घरघरमा सिंहदरबार पु¥याउने लक्ष्य जनप्रतिनिधिहरुले यसरी अग्रसरता देखाइदिए सफल हुन्छ भन्ने उदाहरण हो रत्ननगर नगरपालिका ।
“गाउँगाउँमा, घरघरमा सरकार भनेको यही हो, राज्यको उद्देश्य पूरा गर्ने अभियान यही हो,” प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन खनालले भन्नुभयो । वृद्धवृद्धाको अभिभावक बनेर नयाँ कार्यक्रमको थालनी गरेकामा उहाँले रत्ननगर नगरपालिकालाई धन्यवाद पनि दिनुभयो ।
रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ढुंगाना वृद्धवृद्धा र नयाँ पुस्ताबीच अनुभव आदानप्रदानका लागि ‘उहिलेका कुरा’ कार्यक्रमसमेत रत्ननगरले सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुहुन्छ । रत्ननगरलाई नमूना नगर बनाउने सोच राखिएको छ ।
रत्ननगरले यति मात्रै होइन यहाँ बाँझो जमीन राख्नेमाथि कारवाही पनि थालेको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी संरक्षण कार्य अगाडि बढाइएको छ । सुरक्षित मातृत्व नगर बनाउने अभियानसमेत थालिएको छ । छाडा चौपाया राख्ने गौशाला बनाउने योजना पनि छ ।
रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख दवाडी भन्नुहुन्छ, “हरेक जनप्रतिनिधि अब बुबाआमाका छोराछोरी बन्न सक्नुपर्छ । सुखदुःख साट्ने हुनुपर्छ ।”
नारायणीमा पौडी खेल्ने क्रममा एक युवा बेपत्ता
चितवन । त्रिशूली र कालीगण्डकीको सङ्गम देवघाट बेणिमा पौडी खेल्ने क्रममा एकजना युवा बेपत्ता भएका छन् । आज बिहान ९।३० बजे नदीमा पौडी खेल्न गएका नवलपुर गैडाकोटका २४ वर्षीय अमृत भनिने
चितवनमा सहकारीले गर्यो एक महीनामा एक करोडको सुन्तला बिक्री
चितवन । तामिन कृषि बहुउदेश्य सहकारीले एक महीनामै रु एक करोड बराबरको सुन्तला बिक्री गरेको छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित उक्त सहकारीले गत मङ्सिर २० देखि पुस १९सम्ममा उक्त
छोरी जन्मँदा गाउँपालिकाले ५ हजारसहित बैंक खाता खोल्ने
चितवन । इच्छाकामना गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रको स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका छोरीको नाममा रकमसहितको बैंक खाता खोल्ने भएको छ । गाउँपालिकाले एक जना बालिकाको खातामा रु पाँच हजार जम्मा गरी अभिभावकलाई समेत
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका–१० रिजालचोकमा गए राति मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गौतमचोकबाट पूर्वपश्चिम राजमार्गतर्फ आउँदै गरेको ना४८प ३७५७ नंको मोटरसाइकलले पैदलयात्रीलाई ठक्कर
ट्रम्पको नयाँ प्रस्ताव डेमोक्र्याटिकद्वारा अस्वीकार
चिलीमा ६.७ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प
स्वदेश फर्किएपछि प्रशिक्षक र कप्तान भन्छन्, ‘मानसिक दबाबले फाइनल हार्यौ’
न्यूयोर्कमा दशौं हजार महिलाको प्रदर्शन
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्था खस्किँदो
डा. केसीसँग यथाशिघ्र वार्ता गर्न सरकारलाई अनुरोध
नेपाली काङ्ग्रेसमा अनुशासनहीनता बढेकोमा देउवाको चिन्ता
प्रधानमन्त्री ओली आज स्वीट्जरल्याण्ड जादै
ट्विटर प्रयोगकर्ताका गोप्य सन्देश ५ वर्षसम्म बाहिरिएको खुलासा
विक्की कौशलको बक्स अफिसमा सर्जिकल स्ट्राइक !
टुटल-पठाओ बहस : कानुन बनाऊ, प्रतिबन्ध नलगाऊ !
महिला टी-२० फाइनलमा आज नेपाल र थाइल्याण्ड भिड्दै, को कति बलियो ?
आयोजक थाइल्याण्डसँग नेपाल पराजित
महिला टी-२० : सेमिफाइनल समीकरण पुरा, नेपालले इन्डोनेसियासँग खेल्ने
सिलहेट सिक्सर्स ६८ रनमा अलआउट
म्याक्सवेल र स्टोइनिश टिममा फर्किएपछि मेलवर्न स्टार्स विजयी
आजको कोमिल्लाविरुद्धको खेलमा सन्दीप नखेल्ने
विराट कोहलीले एकदिवसीय क्रिकेटमा बनाए ३९औ शतक
महिला टी-२० : नेपालद्वारा थाइल्याण्ड ए १९ रनमा अलआउट
डिशहोमले आगामी आर्थिक बर्षमा सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने